एसईईमा चिट चोराउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीसँग घुस! - Everest Dainik - News from Nepal
एसईईमा चिट चोराउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीसँग घुस!
काठमाडौं, फागुन २०। जाजरकोटको एक विद्यालयले एसईई परीक्षामा विद्यार्थी पास गराउन भन्दै रकम मागेको रहस्य खुलको छ । एसईई उतीर्ण गराउन विद्यार्थीलाई चिट चोराउनुपर्ने र त्यसका लागि पैसा चाहिने भन्दै हरेक विद्यार्थीबाट २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ रकम मागिएको रहस्य खुलेको हो ।
जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका–५ को भाग्योदय माविमा विद्यार्थीहरुलाई कसरी पास गराउने भन्ने विषयमा बैठक नै बसेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कर्णबहादुर चदारा, प्रधानाध्यापक शान्तबहादुर शाही र १० भन्दा बढी अभिभावक बैठकमा सहभागी थिए ।
याे पनि पढ्नुस एसइइ परीक्षामा ५ लाख ३८ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने
बैठकमा सहभागी एकजना अभिभावकले भने, ‘चिट चोरेर पास हुने भए २५ सयदेखि ३ हजार रुपैया’ चाहिन्छ भनियो । कतिपयले हुन्छ पनि भने । कतिपयले हाम्रा छोराछोरी फेल भए होउन्, तर पैसा दिन सकिँदैन भने ।’ ‘एसएलसी परीक्षा आएपछि जाजरकोटमा पहिले पनि यसरी पैसा उठाइन्थ्यो । अहिले पनि उठाउन थालिएको छ,’ स्थानीय दीर्घबहादुर रावतले भने ।
विद्यालयका प्राधानाध्यापक शान्तबहादुर शाहीले भने परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि छलफल गरेको बताए ।
स्थानीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले केही रकम आवश्यक पर्ने र उक्त रकम विद्यार्थीबाट नभई नगरपालिकासँग माग गरिएको प्रधानाध्यापक शाहीले बताए ।
छेडागाड नगरपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक र मेयर लालबहादुर महतारासहितको बैठकमा नगरपालिकाले एक परीक्षा केन्द्रलाई ५० हजार रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनको दावी छ । ‘बैठकमा हामीले परीक्षा व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकासँँग ५० हजार मागेका छौं,’ उनले भने, ‘मेयरले आवश्यक रकम नगरपालिकाले दिने र विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने काम गर्न नपाइने बताउनुभयो ।’ छेडागाडका १४ विद्यालयका छात्रछात्राले एसईई परीक्षामा सहभागिता जनाउँदैछन् । उनीहरुका लागि चारवटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।
ट्याग्स: jajarkot, see exam